SIDA LOO SAMEEYO QUUDINTA SHIMBIRAHA SAME-IT-YOURSELF: SAWIRADA JIDKA ALWAAX - DHISMAYAASHA
Wixii quudinta shimbiraha waxaad si madaxbanaan u sameysan kartaa quudin ama quudinta miisaska qalabka kala duwan.
Badanaa, dhalooyinka caagga ah, sanduuqyada kartoonada ama fiyuuska ayaa loo isticmaalaa quudinta.
Dhismaha dhamaystiran waxaa lagu dhejiyaa dhoobo ama geed, waxaana sidoo kale lagu dhejin karaa derbiga dhismaha.
Qaybaha iyo darbiyada dhererka la dhammeeyey waa in aysan aheyn wax xoqin ama fiiqan. Miisaska waa in lagu qalabeeyaa boomerayaasha dhinacyada oo dhan, taas oo u oggolaan doonta in aanad uur qaadin marka uu soo gaaro arrimo kala duwan oo dibadda ah.
Buuxinta dhismaha dhamaystiran waa in la sameeyaa laba jeer maalintii si waafaqsan nidaamka.
Qaybaha miraha, miraha gabbaldayaha, masiirka, hadhuudhka, iyo kuwa kaleba waxay noqon karaan kuwo quudin kara.
Akhri boggayaga bogga sifooyinka wanaagsan ee blueberries.
Halkan ka ogow sida loo qalajiyo miskaha.
Fiiri sawirrada madow ee //rusfermer.net/sad/yagodnyj-sad/posadka-yagod/ezhevika-razmnozhenie-posood-uhod-poleznye-svojstva.html.
Gawaarida quudinta ayaa ah door weyn oo loogu talagalay shimbiraha kaynta ee kala duwan oo yar, oo mararka qaar u duulaya magaalada.
1. Waxyaabaha ugu horreeya ee la sameeyo waxay diyaarinayaan afar rakamsi, wadarta guud ee ay tahay in ay noqoto 150 sentimitir. Waxay u baahan yihiin inay ku dhejiyaan hoose ee wareegga wareega wareega;
2. Laba geesood oo isbarbar dhigaya ayaa looga baahan yahay inay xiraan guddiga, kuwaas oo ballaadhkoodu yahay 8 ilaa 10 sentimitir. Waa taageero si loo xareeyo fareemka xarunta;
3. Marka xigta, waxaad u baahan tahay inaad ku xereeysid shimbiraha shimbiraha: mid waxay ku taallaa heerarka sare, kan kale - hoose. Waa in lagu sameeyaa qaab sax ah oo leh dhinacyo yar oo ku wareegsan wareegga;
4. Heerka ugu dambeeya waa rakibidda saqafka dillaacay. Waxay ka sameysan tahay qoryo iyo salka hoose ayaa lagu dabooli karaa shidaal ama ka samaysan caag, xumbo. Waxay ilaalin doontaa nuujinta duufaan;
5. Qaybta quudinta quudinta-pergola ee shimbiraha ka sameysan qoryaha hoostiisa hoosteeda ayaa lagu rakibay.
Xusuusta loo yaqaan "Gardener": Geedka, beeraha iyo daryeelka.
Qalabka daryeelka ee raspberries dayrta //rusfermer.net/sad/yagodnyj-sad/posadka-yagod/aromatnaya-malina-vybor-sortov-i-osobennosti-vyrashhivaniya.html.
Quudinta masaasaddu waa habka ugu sahlan ee lagu abuuro naqshadeynta quudinta shimbiraha yar yar. Inkasta oo ay fududahay, waxay si fiican u qabataa hawlaha.
Si aad u abuurto waxaad u baahan doontaa hal dhalo oo cabbirka dhexdhexaad ah oo qoorta badan leh. Doorasho weyn - dhalada caanaha. Ka sokow calaamadaha dhinacyada leh waa lagama maarmaan.
1. Waxaa lagama maarmaan ah in la gooyo laba laalaab oo ka soo duuban tuubo leh ballaar aan ka badnayn laba sentimitir. Cabbirta waxaa loo doortaa sida ku cad qaybta dhalada ee dhalada;
2. Waxaa looga baahan yahay in dhalada caanaha lagu hagaajiyo labo goobood: qoorta iyo hoosta;
3. Saldhigga laga sameeyay alaab ama alwaax waa in lagu dhejiyaa fogaan ah afar centimitir ilaa dhamaadka luqunta dhalada;
4. Waxaa lagama maarmaan ah in lagu dhajiyo dhalada shimbiraha shimbiraha ku yaal dabayl ama geed qallalan si ay isku daraan isku darka feedhka ee miro, gabbaldayaha, masago, miro si xor ah ugu dhici kartaa digsiga illaa xaaqa soo-baxa uu joojinayo furitaanka dhalada. Naqshadani waxay u oggolaanaysaa inay si joogto ah u bixiso quudinta quudinta.
Waxaan samaynaa waddooyin beerta leh gacmahayaga.
Noocyada isteriga soo koraya ee beertooda gaarka ah //rusfermer.net/sad/plodoviy/posadka-sado/posadka-grushi-v-osennij-period.html.
Feeder for shimbiraha yar yar oo leh ilaalin ka soo boodhadh ka sanduuqa kartoon
Nafaqeeyaha shimbiraha yaryar oo leh difaac ka dhan ah boodhka, ka samaysan sanduuqa kartoonka waa ikhtiyaar fudud oo xitaa ilmo u dhisi karo. Si aad u abuurto waxaad u baahan doontaa sanduuq kabo oo yaryar ah, cajalad duuban iyo silig naxaas ah.
Qalab shimbir yar oo yar oo shimbir ah oo aad cunugaaga ku sameyn karto.
1. Waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo labo god oo yaryar oo ku yaal sanduuqa kartoonka, dhexroorka kaas oo ah inuu ka yaryahay kuwa shimbiraha ah ee loogu talagalay nuujinta;
2. Waa muhiim inaad sameysid 4 meelood oo dhan dhinacyada sare ee sanduuqa iyo si loo hakiyo isticmaalka xadhigga copper;
3. Ka dib, sanduuqa kartoonada waa inuu xiran yahay daboolka oo lagu hubiyo cajalad cirib ah. Rugahan ayaa u oggolaanaya
4. Fududeeyaha dhamaystiran wuxuu u oggolaan doonaa oo keliya shimbiraha yaryar in la nuugo, iyo suufiyeyaasha, marka hore, ma awoodi doonaan inay galaan isku darka feed. Dhismaha waa in lagu dhejiyaa saqafyada ama taajka cufan ee dhirta.